Okumnyama: Ithuluzi Lokuhamba Lokusebenza Ngezithombe | Kusuka kuLinux
Ku Uhlu oluhehayo lwezinhlelo zokusebenza namathuluzi we-Ubuntu / Linux Sishilo ithuluzi elinamandla lokuhamba komsebenzi wesithombe sedijithali elibizwa I-Darktable, ithuluzi libuyekezwe ngoDisemba futhi lalilayishwa ngezinto eziningi ezintsha, phakathi kwazo imodyuli yokuqeda inkungu, ukusekelwa kwezinhlelo ezintsha zokusebenza kanye nokufakwa kwamaphrofayli wokuhlela achazwe ngaphambilini kugqamile.
I-Darktable iyithuluzi esivumela ukuthi senze i- ukuhamba komsebenzi kwezithombe kwenziwa lula, ngoba isinika ithuba lokuthi phatha yonke inqubo yokuthwebula isithombe, kusukela ekuhleleni isithombe sizoshicilelwa enkombeni ekhethiwe.
1 Yini i-Darktable?
2 Izici ezimnyama
3 Ungayifaka kanjani i-Darktable?
I-Darktable Kusetshenziswa kwe ukuhamba komsebenzi wesithombe somthombo ovulekile, nge isikhombimsebenzisi esibonakalayo futhi sinomphakathi omkhulu ngokwanele, ithuluzi linezinto zokukhanya ezibonakalayo nokusebenza okuvumela ukuvezwa kwezithombe emakamelweni amnyama alawulwayo.
Ngaleli thuluzi singakwazi phatha okungalungile kwethu kwidijithali ku-database, engabonwa ngokusebenza kwamakamelo wokukhanya okubonakalayo namnyama, konke lokhu ukuze ukwazi ukukwenza sebenza ngezithombe ngobunyoninco ukuthuthukisa amathoni futhi kuholele esithombeni esinokuphathwa kokukhanya okwanele.
I-Darktable iyindlela enhle kakhulu yokwenza i- LightroomIdizayini nokusebenza kwayo kusiza ukuhlela izithombe futhi kucubungulwe amafayela asicaba anemiphumela yobungcweti, ngendlela efanayo, uhlelo olwenziwe ezithombeni zedijithali lugcina umlando woshintsho, ngakho-ke ukubuyela ezifundazweni ezedlule kulula kakhulu.
Leli thuluzi elinamandla lokuhamba komsebenzi kweLinux liqukethe amamojula angama-61 akuvumela ukuthi wenze imisebenzi eyahlukahlukene, phakathi kwayo esingayiqokomisa:
Edition okungonakalisi kukho konke ukuhamba komsebenzi, izithombe zoqobo azilungiseki.
Ukusekelwa okuthuthukile okuthuthukile.
Ngenxa yokuxhaswa okuhle kwe-OpenCL esingakwenza ukucubungula isithombe kusheshiswe ngu I-GPU.
Ithuluzi elihle kakhulu lokuhlunga nokuhlukanisa izithombe.
Ukusekelwa kwamafomethi wezithombe eziningi njenge I-JPEG , CR2 , I-NEF , HDR , I-PFM , SHELF phakathi kwabanye.
Izici zokuphatha ithoni yezithombe (amazinga, amajika, ukukhanya kanye nokwabiwa kwamathoni).
Ukuphathwa kombala (ukugcwaliswa, ukuguqulwa kombala okukhethiwe nokuphathwa kwephrofayili yombala).
Ukusebenza kokulungiswa kwesithombe (ukufiphaza, ukucija, ukuxuba nokususa amabala).
Imiphumela yobuciko (ukukhiqizwa kwamanzi, ukuhlukaniswa kokuhlukaniswa kanye nokuqina kancane kancane).
Ungayifaka kanjani i-Darktable?
I-Darktable yi-multiplatform (i-Linux, i-Mac ne-Windows), futhi inamaphakeji we-distros ebaluleke kakhulu, into enconywayo ongayenza lapho ufaka i-Darktable ukuya ku- ikhasi lokufaka bese ufaka amaphakheji afanele we-distro yethu bese ulandela izinyathelo ezilungiselelwe yiqembu le-Darktable.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Okumnyama: Ithuluzi Lokuhamba Ngezithombe
Indatshana enhle kakhulu….
Ungayivikela kanjani ikhompyutha yakho ekuhlaselweni